Afghan tu waa dad noocma ah? | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Afghan tu waa dad noocma ah?
Afghan tu waa dad noocma ah?
1. Qoomiyadda Pushtun ka Afghanistan
Magaalada Kararachi oo ah magaalada ugu weyn dalka Pakistan, cidhifkeeda bari oo aan ku noola muddada 6 da sannadood ah waxaa u badan dadka ku nool qoomiyadda Pushtunka.
Intuu isagii eegay ayuu ku yidhi “usoo kiree gurigay rabaan, caawana aniga ayey i marti yahiin oo sooryaynaya”
Previous articleTaariikhda dahabka ah ee Daallo Airline iyo abaalka duuga ah ee ay ku leedahay sadweynaha Somaaliyed.
Next article“Guddoomiyeyaasha Xisbiyada Mucaaradka, waa in aanay seegin in guushii wadareed” Max’ud Xaashi